Somaliland Oo Maanta laga Tukaday Salaad Roob-doon ah
Hargeysa(RH):-waxaa maanta gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Somaliland laga oogay salaad roob-doon ah.
Hargeysa(RH):-Jaamacadda Hargeysa ayaa sheegtay in sannadkan hablaha isku-diiwaan geliyay Jaamacadda Hargeysa ay ka badan yihiin tirada wiilsha.
Maamulka Jaamacadda Hargeysa ayaa sheegay in 1,980 ardey oo u fadhiistay imtixaanka Jaamacadda , ay 1,035 ay yihiin hablo, halka 945 ay yihiin rag.
Madaxa imtixaanaadka Jaamacadda Hargeysa Cabdirashiid Gaaxnuug ayaa xusay in ardaydaasi isku-diiwaan geliyay ama u fadhiistay imtixaankii ay jaamacadda ku galilahaayeen ay tirada soo baxdaa bilaabi doonaan 11-ka kuliyadood oo jaamacadaasi bixiso.
Madaxweynaha Somaliland Oo Shir La yeeshay Maayirada 23-Ka Degmo-Doorasho Ee Dalka
Hargeysa(RH):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi, ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay dhammaanba maayarrada kala duwan ee dhawaan loo doortay 23-ka degmo-doorasho ee dalka.